Kulankii Barlamaanka ee Maanta oo fowdo iyo buuq dartiis lagu kala dareeray – idalenews.com
Kulankii Barlamaanka ee Maanta oo fowdo iyo buuq dartiis lagu kala dareeray
Fadhi uu maanta lahaa Barlamanka Federaalka Somaliyeed,isla markaana u shir gudoominayey Gudoomiyaha Barlamaanku Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sidii cadada iyo dhaqanka u ahaa ku soo dhamaaday buuq iyo qaylo.
Fadhiga maanta oo qasdigiisu ahaa in Lagu soo bandhigo mooshin ay wateen Koox xidhibaano ah oo la safan Madaxweyne Hassan Sheikh, kuwaas oo dalbanaayey in Xil Ka xayuubin Lagu sameeyo Raisal Wasaare Saacid Faarah Shirdoon
Madashii Fadhiga Ka socday ayaa daqiiqado yar Ka dib markii kulanku furmay waxaa Ka bilaamay buuq iyo sawxan xoogan, kadib markii mudanyaasha Barlamaanka badankooda ay u muuqatay in aanu mooshinku waafaqsaneyn dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka u degsan golaha.
Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanada baarlamaanka ee taageersan Ra’iisul wasaaraha ay dalbadeen in mooshinka lagu lifaaqo magacyada saxiixayaasha oo la sheegay in 168 ay soo gudbiyeen, hadii kalena uusan sharci aheyn oo shirqool gudoonka barlamaanku masuul ka yahay in barlamaanku kala qeybsado. Hase ahaatee gudoonka barlamaanka ayaa sheegay in magacyada xildhibaanada saxiixay la soo gudbin doono sabtida soo socota oo ah maalinta codka kalsoonida R/W loo qadaayo, hadalkaas gudoomiyaha yiri deetana ay abuurtay fowdo iyo buuq inuu barlamaanku ku soo idlaado.
Mudanyaasha Baarlamanka ayaa ku baraarugay in laga been sheegay tirada saxda ah ee xubnaha Barlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka, isla markaana waxaa meesha Ka maqnaa saxeexa rasmiga ah ee magacyada xubnaha mooshinka soo gudbisay , sidoo kale waxaa soo baxday tiro badan oo xidhibaano ah oo Lagu been abuurtay.
Gudoomiyaha Barlamaanka mundane Jawaari ayaa Fadhigii maanta soo xidhay kadib markuu u caal waayey inuu qaboojiyo xiisadii iyo murankii u dhaxeyey xildhibaanada iska soo horjeeday ee mooshinka isku khilaafsanaa, iyadoo kulankaa dib loo dhigay ilaa maalinta Sabtida ee usbuuca dambe.
Ma aha markii ugh horeysay ee xiisad iyo khilaaf u dhaxeeya madaxada sare uu saameyn iyo is maandhaaf gacan Ka hadal wataa uu ku yeesho xubnaha Barlamaanka Federaalka Soomaliyeed ee Lagu soo xulo nidaam qabiileedka Lagu magacaabo 4.5, lakiin hore ayey in badan u dhacday in ay kuraas madax iska garacaan, isla markaana dhiig iska daadiyaan, halkii shacbiga Somaaliyeed wax qabad iyo hawl qaran oo dalka iyo dadka wax tar u leh Ka rajeynayeen
Daawo: Odayaasha dhaqanka Digil & Mirifle oo ka xumaadey hadalkii Maamulka Gobolka Hiiraan ee ahaa in 48 saac gudahood isaga baxaan dadka ….